Cunnadayda Peruvian - Cunnadayda Peruvian
Peru waa wadan ka mid ah South America oo ka kooban qayb weyn oo kaynta Amazon ah oo ka kooban mid ka mid ah magaalooyinka Inca ee ugu da'da weyn ee dhererka Andes-ka. Intaa waxaa dheer, waa milkiilaha Dooxada Xurmada leh, Waddada Inca ee kumanaan sano ka hor, farsamada gacanta ee sharafta leh iyo hantida gumeysiga iyo kaydka qadiimiga ah ee ugu weyn qaaradda kuwaas oo sameeya dhaqankooda, dhaqankooda iyo taariikhdooda lama huraanka ah.
Sidoo kale, dhulkani waa abuuraha iyo ka horreeyay mid ka mid ah cuntooyinka ugu fiican adduunka, kuwaas oo ku hadla oo la xidhiidha dhadhankooda gaarka ah iyo qaababka dabeecadaha waddankooda, kalgacalka iyo dadaalka turjubaanadooda iyo kumanaanka suurtogalka ah ee ay ku raaxaystaan ​​joogitaankooda Peru oo leh ur iyo qaniin kasta.
Gastronomy Tani waa set ee suxuunta iyo cabitaanada gaarka ah Peru taas oo qayb ka ah nolosha iyo dhaqamada guud ee dadka deggan, natiijada ka dhalatay isku-dhafka dhaqanka cunnada ee magaaladii hore ee gastronomy-ga Yurub iyo hay'ado kale oo xoogaa yar lagu daray.
Cuntada digaaga ee baradhada iyo yaanyada cas
Digaag waa mid ka mid ah maaddooyinka ugu muhiimsan inta badan suxuunta gastronomy Peruvian, kaas oo ...
Doofaarka Adobo Recipe
Ma qiyaasi kartaa saxan qani ah, siman oo casiir leh? Hadday sidaas tahay, Doofaarka Adobo ayaa noqon doona doorashadaada ugu fiican. Ama loogu...
Digaagga Sillao waa matalaadda ugu weyn ee ka qayb qaadashada cunnada bari ee Shiinaha ee buug-cuntada iyo ...
Maraq ilaa daqiiqo
Maraq a la minuta waa maraq aan qaali ahayn, fudud oo si degdeg ah loogu diyaar garoobay, kaas oo sida loo kariyo ay tahay ...
Chicken Escabeche waa saxan caadiga ah ee gastronomy Peruvian, kaas oo gaadhay xeebaheeda iyada oo loo marayo ...
Cuntada cas tagliatelle
Taariikhda saxan caan ah oo caan ah oo caan ah oo caan ah oo caan ah oo caan ah ayaa ka muuqda sanadihii 1840 iyo 1880 markaasoo qadar badan ...
quraac la yaab leh carruurta
Munaasabad kasta waa fursad weyn oo lagu bixiyo quraac la yaab leh, iyo xitaa si ka sii badan marka cuntadan macaan la hago...
Carapulca oo leh maraq qallalan
Carapulca oo leh maraq qallalan waa saxan Peruvian ah, sida laga soo xigtay taariikhda qoraayaal badan oo gastronomic ah iyo cilmi-baarayaal, waa ...
Patrashca ee kaynta
Patrashca ee kaynta waa saxan asalkiisu ka soo jeedo dadka asal ahaan ka soo jeeda iyo dadka deggan Peru ka hor ...
Asalka dhabta ah ee ceviche waa suurtogal inaan waligiis la ogaan karin, maadaama ay tahay saxan ay ku muransan yihiin inay iyadu leedahay dalal dhowr ah...
Isla mar ahaantaana, nooca cunnada ayaa ka mid ah Ugu muhiimsan adduunka waxaana tusaale u ah cunnada fiyuuska ay sabab u tahay taariikhda dhaqamada kala duwan ee ay dheer, taas oo ku salaysan isku dhafka ah ee aqoonta aasaasiga ah ee Peru qadiimiga leh cunnada Hispanic ee kala duwanaanshahooda ugu xooggan, joogitaanka Andalusian iyo qayb ka mid ah xeebaha Atlantic ee ka hooseeya Saxaraha Afrika ee addoommadii markii la helay deegaanka ayaa ka dhacay.
Adduunka, cunnada asalka ah ee Peru waa tan ugu kala duwan abid, halkaas oo, mahadsanid buugga "57 waxay diyaar u yihiin inay fahmaan sida aanu reer Peru nahay" lagu tiriyaa ilaa 491 saxan caadi ah. Xeebta Peruvian waxaa ku yaal 2500 oo nooc oo maraq ah, iyo sidoo kale in ka badan 250 macmacaan dhaqameed iyo 70 cabitaan dabiici ah oo ay la socdaan diyaarinta khamriga. Laakiin, waxaad la yaabi doontaa sababta tiradan suxuunta ay u jiraan? Jawaabtuna waa mahadsanid Juqraafiga gaarka ah ee dalka gacan ilaa gacan isku dhafka dhaqanka iyo la qabsiga culimadii kale ee qadiimiga ahayd ee cuntada casriga ah.
Saxan kasta waxa ku jira dhadhan jilicsan, qaar badan oo ku xidhan qaybta ay ku abuuran yihiin, sida dhadhanka mar, milixda ka soo baxda xeebaha iyo xitaa midabka iyo urta aadka u daran ee wax kasta oo qorraxda iftiinka leh. Marka laga hadlayo buuraha, Qabow iyo dhadhan leh farxad xoogaa yar oo ay la socdaan ubaxyo, caleemo iyo qaybo kale oo soo nooleeya cusub iyo xasilloonida dabeecadda. Iyo halkii, in uu aagga dhexe, kaas oo ah mid ay ku hareeraysan yihiin dhismayaal, dhaq-dhaqaaq dhaqameed iyo jawi aad u qurux badan, cuntada leh hawo mustaqbal leh oo cajiib ah Dazzles in textures, iska hor imaadyada iyo xitaa kakanaanta qaababka iyo midabada.
Si kastaba ha ahaatee, waxaas oo dhan kama foga in la dhadhamin karo, maadaama warbaahinta shisheeye ay fursad siiso ogow oo cun cuntooyinka dhaqanka ah iyo baahida qaran ee gudaha iyo dibadda Peru ee laamaha kala duwan ama makhaayadaha caalamiga ah, taas oo u oggolaanaysa dadka maxalliga ah, booqdayaasha iyo ajnabiga, inay dhadhamiyaan, ogaadaan oo ay xusuustaan ​​dhadhanka quruxda badan ee dhulkan weyn.
Si la mid ah, bogag wargelin ah, warbaahinta iyo shabakadaha bulshada, iyo sidoo kale qalab maqal-muuqaal ah oo ku yaal shabakadaha iyo boodhadhka dhijitaalka ah ee dadweynaha ayaa had iyo jeer diyaar ah oo muujinaya diyaargarowga iyo digniinta in wax kasta oo la abuuri karo ay noqon doonaan marmarsiiyo lagama maarmaanka ah si dib loogu soo celiyo iyaga oo la sii wado abuurista.
Xaaladdan oo kale iyo si aad u hesho jidka aad ku majeerto, u diyaariso oo la wadaagto suxuuntan, cabitaannada, mac-macaanka, maraqa, qalalan. Khamri iyo rux, myperuvianfood wuxuu ku siinayaa ballaaran liiska cuntada, diyaargarow iyo tilmaamo si aad u dhadhamiso macaanka iyo raaxaysiga dhadhanka Peru kuu hel.
Tani waa a bogga internetka ku takhasusay bandhigga wax ballaaran oo shahaado ah oo kala duwan cuntooyinka, dhammaan si sax ah ayaa loo habeeyey si aadan ugu baahnayn inaad noqoto cunto karis heersare ah si aad u gaarto heerka fulinta ee cunnada caanka ah ee Peru. Si kastaba ha ahaatee, in yar u gunta qoraalkan oo soo hel fursadaha iyo faa'iidooyinka ku jira myperuvianfood waad gaari doontaa
Sidii hore loo bartay, myperuvianfood waxaa loo soo bandhigaa sida a interface online buuxsamay diyaargarow badan Suxuunta astaanta u ah, dhaqanka iyo suxuunta caanka ah ee Peru; iyo sidoo kale cunnadaas xarrago leh, dhiirranaanta, qadiimiga ah, casriga ah iyo xitaa casriga ah ee magaalada oo dhami ay na siisay oo qaar badan oo ka mid ahi ay u xuubsiibteen in ay nagu sixraan oo ay nagu wareeriyaan wakhtigan xaadirka ah.
Boggan waxa uu leeyahay makiinad wax raadis oo ka kooban wax badan buug-yaraha nuxurka. Xaaladdan oo kale, waa la ilaalin doonaa diyaarinta, cunto karinta, tallaabo tallaabo tilmaamaha, sidoo kale warbixin kooban oo ku saabsan taariikhda iyo qaar ka mid ah xaqiiqooyinka cajiibka ah ee cuntooyinka kala duwan ee loo qaybiyo si waafaqsan goobta diyaarinta iyo dhaqanka.
Sida soo socota, the nuxurka bogga iyo qaybinteeda:
Intaa waxaa dheer, waxay ku siinaysaa mashiinka raadinta shakhsi ahaaneed halkaas oo aad geli karto si aad u raadiso khadadka kala duwan qaybaha jikada ee soo socda:
Kani waa qaab jikada oo aad u dhawaa Peru maadaama ay qaadato cuntooyin ka prehispanic hore in dib loo abuuro iyaga, samata bixinta iyo qiimaynta maaddooyinka dalka u dhashay. Halkan waxa ka yimaadda cuntooyinka waddaniga ah sida tarwi, chuño, quinoa, kiwicha, moriya, kochayuyo, maca, kookaha iyo goose.
Cunnada noocaan ah, mashiinka raadinta wuxuu tuurayaa dhammaan suxuunta halka ay ku taal bariis noqo wehel ama runtii, noqo qaybta ugu muhiimsan. Waad ku mahadsan tahay Socdaalka Shiinaha ee Cantonese, dhadhankii ka soo jeeda Aasiya ayaa isku biiray oo sababay cuntooyin kale oo lagu soo bandhigay gudaha bogga internetka sida gebi ahaanba ka Peru laakiin leh xididdada iyo faragelinta ka yimid waddamo kale oo miisaan yar.
Hantida kalluun fauna ee Peru, way weyn yihiin, sidaas darteed cunnooyinka ayaa la qabsaday waxyaabahan dabiiciga ah. Waxaa ka mid ah noocyada chupe, sida ceviche, mussels style chalaca, tiradios iyo seco.
Cunnada Creole waxay leedahay xilligeedii ugu horreeyay Qarnigii XNUMXaad waana noocyo kala duwan oo u dhashay magaalooyinka xeebaha ah wakhtiga ku-xigeenka ee Peru. Halkan waxaa ku yaal dhammaan cuntooyinka u dhexeeya qarniga XNUMXaad iyo XNUMXaad oo ay la socdaan farsamooyinka, taariikhda iyo maacuunta gaarka ah.
Qaybtan sare ee dalka, sida waa Andes, cuntadu waxay ku salaysan tahay baradhada, galleyda iyo khudaarta iyada oo gacmaha la is qabsanayo ayaa la keenay bariis, rooti iyo baasto iyo hilib sida lama, alpaca iyo duurjoogta. Iyada oo ku saleysan maaddooyinkan ayaa ah in cuntooyinka boggu u tuurayo macaamilka la sameeyay
Laga soo bilaabo kaynta
dhammaan cuntada leh dhaymada, suugada iyo dareeraha Waxay u dhigantaa suxuunta kaynta, taas oo la socota khudaarta qalalan iyo qiyaas ahaan la kariyey ama aan lahayn saxnaansho badan.
Doorashadan geli kuwa kale cocktails iyo khamriga. Iyo sidoo kale dhammaan diyaargarowga ku lug leh adkaha khamriga ama alaabada kale ee khamiirsan.
Waxyaabaha ay ka kooban tahay si aad u hesho
Bogga dhexdiisa waxaad ka raadin kartaa cuntadaada sida ku saleysan qayb muhiim ah inaad isticmaasho, kaas oo muujin doona dhammaan waxyaabaha hababka la heli karo ee badeecadan xiddiga.
Kuwaas maaddooyinka aadka loo raadiyo oo la isticmaalo wax yar ayaa la soo bandhigay, markaa waxaad haysataa fikrad ah waxa la raadinayo, oo ku habboon waxa caadi ahaan loo isticmaalo diyaarinta Peruvian.
Kalluunka, qolofleyda iyo qolofleyda
doofaarka guinea ama doofaarka guinea
Dhammaan cuntooyinka ka soo jeeda Peru waa kaliya muhiim ah bulshada gudaha iyo caalamkaba, sababtu waa taariikhdeeda, astaamaheeda ama si fudud sababtoo ah dhadhankeeda gaarka ah oo aan la barbar dhigi karin.
Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira suxuun qaar ka mid ah oo u taagan xoojinta weyn ee ahaansho hidaha iyo dhaqanka magaalada. Qaar ka mid ah kuwan ayaa laga helayaa iyagoo ku dhex milmay myperuvianfood waxaana lagu tilmaamaa samir iyo dhawris; magacyadooduna waa sidan.
Yaanyada la buuxiyey
bariiska digaaga noole
Boorash guduudan iyo quinoa
chicha galley guduudan
Maxay yihiin cuntooyinka mashiinka raadinta?
myperuvianfood ka kooban buug cunto karinta ka badan 100 qaacido loo qaybiyey si waafaqsan nooca saxanka ama cabitaanka si loo raro. Tani iyada oo ujeedadu tahay faafinta yaabka cunnada Peruvian, macaankeeda, dhadhankeeda, joogtaynta, udgoonka iyo texture, taas oo siisa dadka maxalliga ah iyo booqdayaasha fursad ay ku soo baadha taariikhdeeda iyo dhaqankeeda hal bandhig.
Sidoo kale, kani waa shabakad ujeeddadeedu tahay in la oggolaado cilmi-baare kasta u diyaari cuntooyin kala duwan oo raaxo leh meel kasta oo aad joogto, oo leh maaddooyinka ugu fudud uguna macaan iyo inta aad rabto, si aan loo baahnayn in la aado makhaayad iyo baabi'in kharashaadka sare Suxuunta astaanta u ah iyo kuwa is-hoosaysiinta ah ee ay magaalada Peru bixiso.
Sidaa si la mid ah, waa dhexda tuurta dhammaan dadka soo booqda. cuntada fudud super taas oo aan lahayn waxaad u baahan tahay inaad noqoto cunto kariyaha ugu khibrada badan si aad u soo saarto. Waxa kaliya ee lagama maarmaanka ah waxay ku bilaabataa fasiraad wanaagsan iyo feejignaan marka la karinayo, dhammaan maaddooyinka iyo dabeecad wanaagsan marka la bilaabayo.
Haddii ay jirto rabitaan ah in la sameeyo xiriir kasta oo madal, myperuvianfood leeyahay a hab fudud oo raaxo leh oo xidhiidh ah si aad u muujiso shakigaaga, dhibkaada ama rabitaanadaada horjoogayaasha iyo maamulayaasha shabakada, kuwaas oo wakhti go'an ka jawaabi doona codsigaaga ama mudnaantaada si joogitaankaaga iyo baahiyahaaga loo xalliyo.
Dhexdhexaadintan waxaa loo soo bandhigay sidii a foomka oo u habaysan sida soo socota:
magacaXogtan waa lagama maarmaan si ay ku siiso a aqoonsi Milkiilaha codsiga, sida ay noqon doonto shuruudaha qasabka ah ee lagu tixraacayo qofka haddii ay dhacdo in laga jawaabo ama loo yeero fiiro gaar ah
Boostada elektaroonik: Milkiilayaasha bogga waxay soo diri doonaan jawaabaha iimaylkaaga, waa sababta ciwaankani muhiim u yahay
Mawduuca: Halkani waa meesha laguu qoondayn doono a mawduuc ama dood fariinta. Waxay leedahay meel yar markaa tilmaantu waa inay noqotaa mid gaaban oo sax ah
fariin: Meeshaan waad awoodaa sheeg dhib kasta ama baahi kasta oo aad u baahan tahay inaad farageliso. wuxuu leeyahay a Meel ballaadhan halkaas oo aad si raaxo iyo xoriyad ku jirto uga sheegi karto wax kasta oo na dhibaya. Laakiin si kastaba ha ahaatee, waxaa lagu talinayaa in ay noqoto mid gaar ah oo faahfaahsan dhibaatada ama su'aasha
Cuntooyinka ugu wanaagsan ee Peruvian